Governemanta hiady : miady ho any ivelany ireo minisitra | NewsMada
Governemanta hiady : miady ho any ivelany ireo minisitra
Tsy araka ny teny omena sahady! Voalaza fa “noho ny hamehana…”, azo adika hoe “maika” ny asan’ny fanjakana, ary ao anatin’izany ny an’ny governemanta. Milaza ny praiminisitra vaovao fa “governemanta hiady” ity mitsangana ity. Raha ampifandraisina ireo roa ireo, hijery ny laharam-pahamehana ny governemanta, ary azo tarafina amin’ny fotoana tsy maintsy namitana ny famindram-pahefana ny talata teo farafahatarany ary nivory fanindroany ny alarobia. Rehefa nozohina anefa ny tatitra tao anatin’ny filankevitry ny minisitra farany teo, tsy hita izay fanapahan-kevitra mamaly ny “toky nomena fa hitsinjo ny fiainam-bahoaka”, toy ny tsy fisiana asa, ny tsy fahampian’ny rano fisotro toy ny aty an-dRenivohitra vokatry ny tsy fahampian’ny tosiky ny Jirama, ny tsy fandriampahalemana, sns.
Olana mihatra mivantana amin’ny fiainam-bahoaka ireo, fa aleon’ny filankevitry ny minisitra nanapaka sy nankato ny fandehanan’ny minisitra isan-tsokajiny hanatrika fivoriambe iraisam-pirenena any ivelany.
Fivoriambe toy ny fivoriana ihany
Lazaina fa governemanta hiady ity mitsangana ity, nefa noraisin’ny minisitera hiadiana handehanana any ivelany izany. Santionany, fivoriana ho an’ny vaomiera teknika manokana afrikanina; momba ny tetibolam-panjakana, ny ara-bola, ny fandrafetana ny drafitra ara-toekarena sy ny fidirana ao anatin’ny rafitra iraisam-pirenena samihafa ary ny fivorian’ny minisitra afrikanina amin’ny tetibola sy ny fampandrosoana ara-toekarena (CEA), ny 31 marsa-5 avrily any Addis-Abeba Etiopia.
“Niady” ny handraisany anjara amin’ny fivoriambe “ Forum 2016” mikasika ny orinasa amin’ny fampahalalam-baovao (SMSI) koa ny minisitry ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny teknolojia niomerika, hatao any Génève Soisa amin’ny 6 mey ho avy izao. Anisan’ny “niady” ho any ivelany hanatrika ny fivoriana mikasika ny “ady amin’ny heloka omanina sy ny fampihorohoana aty amin’ny faritr’i Afrika sy ny oseana Indianina” koa ny minisitry ny Fitsarana, hatao eto Madagsikara ny 26-28 avrily. Raha fintinina, fivoriana ambony latabatra ihany ireo, fa tsy hita mivantana amin’ny fahantran’ny vahoaka ny fiantraikany.